Round Tin Ibhokisi
Iziphuzo & Amathini Amawayini
Amathini Kawoyela Odliwayo
Kungani ukudla kuthanda ukupakishwa emathinini e-tinplate
Njengomenzi wamabhokisi e-tinplate, ngibone amabhokisi amaningi we-tinplate azo zonke izinhlobo. Amabhokisi we-Tinplate ahlukaniswe izinhlobo eziningi, ahambelana nezidingo ezahlukahlukene zomphakathi wanamuhla. Thatha ukudla njengesibonelo. Akuzona zonke izinhlobo zokudla ezingalethwa kubathengi ezintsha, ezizale ...
Umlando wokuthuthukiswa kanye nezinzuzo zamathini amathini
Lapho imboni yokwenza amathini yensimbi isanda kuqalwa, yayilinganiselwe inqubo yokukhiqiza nobuchwepheshe. INissan ayivamile ukusebenzisa ibanga elilinganiselwe. Manje ithole ukuthuthuka kwesikhathi eside kanye nokuqongelelwa kwezobuchwepheshe okukhipha nsuku zonke amashumi ezigidi. Ingakwazi ukuhlangabezana nokwanda kwesidingo f ...
Ungakunciphisa kanjani ukushiyeka kokufakwa kwebhokisi lensimbi okulula ukugqwala
Uma ubheka ngokucophelela, ngokungangabazeki uzothola ukupakishwa kwe-tinplate ekhaya lakho. Amabhokisi ezipho afana namathini wetiye, amathini ekhekhe lenyanga, namathini okudla konke kusebenzisa i-tinplate. Amathini amathini ngokuvamile angena ngokushesha kuzo zonke izigaba zempilo yawo wonke umuntu. Akukhona ukubukeka okuhle kuphela, kepha inani lokusetshenziswa kabusha o ...
Ukufakwa kwebhokisi le-Iron kuphela ongakwazi ukukucabanga, awukwazi ukulisebenzisa ngaphandle
Yiziphi izimboni ukufakwa kwebhokisi lamathini okusetshenziswa kuzo? Ukubona lo mbuzo, impendulo yawo wonke umuntu kufanele kube yimboni yokupakisha ukudla, imboni yokupakisha amaqabunga etiyi, njll abajwayele. Ngempela, ezimbonini eziningi zokupakisha, usubonile ukupakisha okuningi kwebhokisi lensimbi. Namuhla, umhleli udinga t ...
Ungalihlanza kanjani futhi uligcine ngokucophelela ibhokisi lethini letiyi
Abantu bavame ukuthi: “Izinto eziyisikhombisa ukuvula umnyango, izinkuni zokubasa, irayisi, uwoyela, usawoti, usoso netiye leviniga.” Lokhu kukhombisa ukuthi itiye selingene langena kuzo zonke izigaba zempilo. Ngakho-ke abantu baseChina bayathanda ukuphuza itiye, ngakho ngabe nonke niyazi ngokugcinwa kwamabhokisi okupakisha etiye? 1. Zama ukugwema ukuxhumana ...
1. Ukupakisha kwensimbi kuyaqashelwa ngabathengi ngokusebenziseka kwayo nokuguquguquka kwayo. Ukupakisha kwensimbi kungabonakala yonke indawo empilweni yanamuhla yansuku zonke. Ukuthuthuka kwayo okusimeme kanye nezici ezivelele ezibalwe ngezansi kuyenza isixazululo esifanelekile sokupakisha ngekhulu lama-21: Izinzuzo zephakheji yensimbi ...
Ikheli: Cha. 14, Longcheng Mid-road, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen, China
Ibhokisi leTin, Ukupakisha kweTin Box, Ikesi Lesitoreji se-Cd, Ngokwezifiso Tin Ibhokisi, I-Ring Pull Can Opener Uzipho, Ibhasikidi Yesitoreji Sensimbi EsineLid,